Nsuku zonke sisebenzisa izinongo ezihlukahlukene ukuze sengeze ukunambitheka nesinambithelo esengeziwe ezitsha zethu. Kodwa ingabe wake wacabanga ukuthi ukusebenzisa izinongo ungaba nempilo futhi uphile isikhathi eside? Kungenzeka ngempela.
Ngosizo lwezinongo ungashintsha hhayi kuphela ukunambitheka kwesidlo, kodwa futhi wena, umzimba wakho. Ngokusebenzisa kahle, zingathinta kahle umzimba wonke. Lokhu kungenxa yokuthi izinongo zisebenzisa izinqubo zokusebenzisa umzimba: ziqinisa futhi zivuselele izigulane zokugaya, zithuthukise umsebenzi wamathumbu njalonjalo.
Izici ezithandekayo ze
Izinongo zivikela imithambo yegazi nenhliziyo. Ngakho bathi ososayensi abaqhuba ucwaningo eNyuvesi yasePennsylvania. Labo abafaka njalo ukudla okunamafutha enkukhu nasekukhuleni, banciphise izinga "cholesterol" emizimbeni yabo ngo-15%.
Izinongo ziyakwazi ukulwa nomdlavuza. Leli qiniso laqinisekiswa yizifundo zososayensi ezivela esikhungweni se-Cancer Johnson. Njengoba kuvela, i-curcumin iqukethe i-curcumin, ekwazi ukuvimbela amaketanga e-biochemical okukhuthaza ukuthuthukiswa kwezifo ezingokwemvelo zentanyeni nekhanda. Yiqiniso, kukurmin akuyona leyo enamandla okwanele ukuba isetshenziswe njengokwelashwa komdlavuza. Kodwa odokotela abaningi batusa ukusetshenziswa kwayo ngesikhathi nangemva kokukhipha i-chemotherapy, ngemuva kokuhlinzwa noma ukuxiliswa. Futhi, i-curcumin inciphisa umphumela omubi we-nikotini emzimbeni womuntu obhemayo.
Ukwandisa i-libido Kusukela ezikhathini zasendulo, ezinye izinongo zibhekwa njenge-aphrodisiac enhle. Ababambisene nemithi yokwelashwa yamangqamuzana futhi ehlangene baye bahlola iphunga (naye u-shamballa no-fenugreek). Lesi sitshalo siqukethe ukuvuna komphemeli, futhi singathengwa ngokwehlukana. Njengoba kwenzeka, i-fenugreek iqukethe ama-compounds amaningi (ama-saponins), angakhuthaza ukuthuthukiswa kwama-hormone ocansi, ikakhulukazi i-testosterone.
Siza ukubhekana nokushisa okuvamile futhi unciphise ubuhlungu emisipha. Uma sigula, siya ngokushesha ekhemisi bese sithenga imithi eminingi. Kodwa ungaphinda uphulukiswe nge-sprains. Isibonelo, i-ginger inezici ezinhle zokulwa nokuvuvukala nezama-antimicrobial. Ngakho-ke, ubhekana kahle nemikhuhlane kanye ne-ODS. Kulabo abahlanganyela emzimbeni noma ezemidlalo, i-ginger nayo iyoba usizo. Usiza imisipha ukuba ilulame futhi iphumule ngemva kokuqeqeshwa.
Ukusheshisa ukushintshaniswa kwezinto. Ukushisa izinongo kunganciphisa kancane izinga lokushisa lomzimba wethu futhi kuphuthumise umthamo we-metabolism cishe ngo-8%. Lesi senzo sinesiliva esihle, sinezinhlamvu eziningi ze-capsaicin - into eyenza i-chilli ukuthinta. Umphumela ofanayo unikezwa i-ginger no-pepper omnyama. Kubalulekile ukuphawula enye inzuzo evela ku-capsaicin - le nto ingakwazi ukubulala amanye amangqamuzana omdlavuza emzimbeni. Lokhu kwaqinisekiswa ekuhlolweni okwenziwe ezilwaneni.
Ososayensi baseCanada baye bafakazela ukuthi uma udla ukudla okuncane okusheshayo ngaphambi kokudla ngakunye, kuzosiza ukuthola amakholori angu-200 ngaphansi kokudla. Futhi, lokhu kuphumela ngenxa ye-capsaicin - kungabangela umuzwa wokuzizwa.
Enye yezinzuzo eziyinhloko zezinongo ukuthi iqukethe antioxidants okuningi kakhulu kunezinye imikhiqizo. Futhi njengoba i-nazyvestno, i-antioxidants isiza ukulwa nemiphumela ebulalayo yama-radicals wamahhala, futhi ivuselele nentsha yethu futhi ithuthukise impilo yethu.
Abacwaningi e-National Center for the Study of Aging Processes bahlaziya izakhiwo zokuvimbela izifo ezingu-277 nokudla. Bathatha isilinganiso sokutholwa kwe-oxygen radicals (SARK). Ephakeme kakhulu i-SARK, i-spice iyaphumelela kangcono emithonjeni yama-radicals mahhala. Njengoba kwenzeka, izinongo ziqukethe okuningi okwe-antioxidants kunama-vagodas. Indawo yokuqala phakathi kwama-antioxidant izinongo zazihlala ngama-clove ne-sinamoni. Kwesipuni esisodwa salezi zinongo, kunezidakamizwa ezingaphezu kwengxenye yeglasi yama-cranberries noma ama-blueberries. Futhi i-turmeric ne-oregano yayibaluleke kakhulu kunekhomegranate ne-sitrobheli.
Izakhiwo ze-antioxidant zezinongo zazihlolwe ngenye indlela-ikhono lokulwa nama-oxidic iron compounds (CROS). Izifundo zaqhutshwa ngabososayensi base-Ireland, futhi kuphinde kwaba khona ukuthi phakathi kwayo yonke imikhiqizo, ukuqothulwa kwaba umholi. Ngakho-ke, kuvela ukuthi ama-clove yi-spice ewusizo kakhulu futhi i-antioxidant yonke indawo. Izinongo ezisele ziphumelela kakhudlwana kwesinye isiqondiso. I-cumin kahle ithatha i-oksijeni, kodwa cishe ayikho insimbi ephazamisayo, i-amoyoran ne-sage ine-CERF ephezulu, kodwa cishe ayifuni ku-SARK.
Ukuqhubeka okuvela phezulu, ososayensi bafinyelela esiphethweni sokuthi ukuze kuzuzwe inzuzo enkulu kunamafutha, kubalulekile ukuhlanganisa ngesitsha esisodwa izinhlobo zezinongo eziningana.
Into esemqoka - ungahambi kakhulu!
Kungakhathaliseki ukuthi izinongo eziwusizo zazingekho, ukusetshenziswa kwazo kungabangela imiphumela emibi. Ngaphezu kwalokho, ngezifo ezithile, izinongo ezithile azikwazi ukudliwa. Isibonelo, i-garlic, i-kukurma kanye ne-cumin ingaqinisa futhi ifinyelele umthelela wemithi ethile. I-pepper ebomvu nebomvu kumele isetshenziswe ngokuqapha ekudleni, ohlukunyezwa yi-gastritis nezifo zesisu. Futhi ngisho nabantu abanempilo enhle abanconywa ukuba badle okuningi okubabayo. Uma kungenjalo, kungabangela i-membrane ye-mucous ishise.
Uma uwedlula ngegalikhi, kungaholela esigulini esiswini. I-Carnation iphikisana neziguli ezinegazi eliphakeme kanye nezingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala. Iqabunga le-bay liyanciphisa i-coagulability yegazi, ngakho akufanele lisetshenziswe ngabesifazane abakhulelwe, abesifazane abahlengikazi nalabo abajwayele ukuphuma.
I-Nutmeg, naphezu kwesithunzi sayo, nayo iyingozi nakakhulu. Uma sekuphelelwe yisikhathi, kungase kube khona ukuphathwa ikhanda, izilonda, isizungu. Kodwa ngamanani amancane kuyasiza kakhulu: kusiza ngokukhathala, kuvuselela ukugaya, kugcwalisa amandla, kuthuthukisa inkumbulo futhi kushukumise ukujikeleza kwegazi.
Iziphi izinkinga ezingaxazululwa ngosizo lwe-condiments?
Njengoba sekushiwo ngenhla, ngosizo lwezinkathi zokuphumula ungakwazi ukuxazulula izinkinga zempilo eziningi. Into esemqoka ukuhlanganisa ngokufanele izinongo futhi ube nesimemezelo mayelana nezakhiwo zabo eziwusizo.
Ama-antiseptics: pepper omnyama nopomvu, i-clove, i-turmeric, i-coriander.
Ama-Painkillers: i-nutmeg, i-ginger, isilili, i-fennel.
Kusukela ku-bronchitis: i-chili, i-cardamom, i-ginger, i-fennel.
Ukusuka ekulaleleni: isinamoni, i-fennel ne-turmeric.
I-Diuretic, antipyretic, yokuqeda ubuthi: i-ginger, i-fennel, i-turmeric.
Ukuhlanzwa ngegazi: i-fennel, i-turmeric, i-ginger.
Ukwelashwa kwezifo zesikhumba: lwesinaphi, i-turmeric, nut nut donut nut.
Ukuthuthukisa ukugaya: i-safari, i-chili, i-ginger, i-pepper ebomvu ne-turmeric.
Ukuthuthukisa imemori: i-ginger nomsundu omnyama.
Isisindo sempilo yesipelingi
Ukuze izinongo zilethe izinzuzo zezempilo eziphezulu, akufanele zigcinwe isikhathi eside kunokuphila kwazo.
Izinongo eziphelele (isibonelo, amaqabunga e-clove, ama-peppercorns, amakhanda wamakhadi) angagcinwa iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Izinongo eziphansi-kusukela ezinyangeni ezintathu kuya eminyakeni emibili.
Izinongo zeLeaf (ama-thyme, amaqabunga) - ngokulondolozwa okufanelekayo kufanele kube khona ezinyangeni ezintathu kuya eminyakeni emibili.
Imifino eyomile ehlutshiwe akufanele igcinwe isikhathi esingaphezu kwengxenye yonyaka.
Izakhiwo eziwusizo zezinhlanzi ezibomvu
Izakhiwo eziwusizo zezinhlanzi zomzimba womuntu
Ukwelashwa ngezifo zesibindi
Yiziphi izinongo eziyingozi empilweni?
Izinganekwane mayelana nokudla. Yini ewusizo, futhi yini eyingozi. Ukudla
Indlela yokuyeka ukudla ngokweqile
Ngingakuhlanza kanjani isibindi?
Ukubhekela izingane: incwadi yokufundisa
Izitshalo zangaphandle: hedera
Ukulima nokunakekelwa kwe-chlorophytum
Ukubeletha umntwana osanda kuzalwa
Yini okufanele ingane eneminyaka eyodwa ikwazi ukuyenza?
Impilo yabesifazane nokukhulelwa
Kungani ukungakhulelwa kuthatha okungaphezu konyaka?
I-Timati yakhanga uRamzan Kadyrov ukukhangisa abakwa-burgers bakhe, ividiyo